सन्दर्भ संविधान दिवसकाे, प्रसङ्ग अपाङ्गता अधिकारको « Sansar News
३ आश्विन २०७८, आईतवार १३:५०
प्राय एकाबिहानै सहयोगको आह्वान गर्र्दै विभिन्न मिठा गीतहरुको प्रस्तुती दिएर सहयोग माग्ने एक समूह आज संविधान दिवसको दिन बिहानै हाम्रो दैलोमा आयो । म सक्ने भएर होइन, भावनाका कारण तरकारी किनेर फर्किएको २२० रुपियाँ दिए । त्यो सहयोग दिँदा मलाई गर्व होइन भित्र कताकता आफैलाई हिनताबोध भयो, त्यो हिनताबोधमा फेसबुकको स्टाटस लेख्दा लेख्दै भावना अलिकति लामो बन्न पुगेको छ ।
हामी देखिइरहन्थ्यौ की बेला बेलामा उनीहरु वरपरका घरमा बस्ने तथा बाटामा हिड्ने बटुवाहरुसँग सहयोगको आह्वान गर्दै विभिन्न याचनाहरु गर्दथे । जसले सहयोग दिन्छ उसले दिएको रकम र नाम माइकबाट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न आर्शिवादका गुच्छाहरु दिने गर्दथे । हाम्रो टोलमा आएइका यिनीहरुले पक्कै पनि अन्त पनि यस्तै याचना गरेका छन ।
उनीहरुले सहयोगको लागि गरेको याचनाहरु सुनेपछि मन भारी भएर आउँछ । किन कोही व्यक्ति शारीरिक अपाङ्गता भएकै कारण सडकमा आउन बाध्य हुन्छ ? किन बाँच्नका लागि कसैको सहयोगको याचना गर्नुपर्दछ । के उनीहरुप्रति राज्यको कुनै उत्तरदायित्व छैन । निर्वाचनका बेला मत त उनीहरुको पनि चाहिन्छ । हात जोड्दै उम्मेदवारहरु उनीहरुका सामू पनि पुगेकै हुन्छन् । उनीहरुको अशक्ताप्रति दयाभाव देखाउँदै विभिन्न आश्वासन पनि दिएकै हुन्छन् ।
शारीरिक अपाङ्गता भएकै कारण उनीहरुले गर्न सक्ने काम नपाउँदा र बाटामा मागेर हिड्नु पर्ने बाध्यता आउँदा उनीहरुको मनमा कतिचोट परेको होला, आफ्ना सन्तानको यस्तो अवस्था देख्दाउनीहरुको अभिभावकमा कति पीडापरेको होला । सोच्दा मन झनै भारी भएर आयो । उनीहरुसँग राम्रो गाउने कलापनिछ ।
सम्पन्न देशमा अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई राज्यले विशेष सुविधा र केयर गर्ने कारण यस्ता व्यक्तिहरुलाई हेय होइन, सम्मान दिने गरेका छन् तर हाम्रो देशमा यस्ता व्यक्तिलाई परिवार र समाजले हेयले हेर्ने, तिरस्कृत गर्ने गर्दछ । जसकाकारण उनीहरु बाटामा मागेर हिड्नु पर्ने बाध्यता बन्ने गर्दछ ।
शारीरिक अपाङ्गता कुनै पाप होइन, जोकोही मान्छे कुनै पनि बेला अपाङ्ग बन्न सक्छ । सडक दुर्घटनामा परेर सयौँ व्यक्ति अपाङ्गता भैरहेका छन् । अघिल्लो दिन सग्लो देखिएको मान्छे भोलिपल्ट शरीरको कुनै अंग नचलेर प्यारालाइसिस बन्नु परेका घटनाहरु हामीले देखेकै छौँ । तर किन कसैको शारीरिक कमजोरीलाई उपहास गर्दछौ त ! शारीरिक असक्ततालाई आधार बनाएर उनीहरुलाई सम्बोधन गर्ने मात्र त्यहि सम्बोधनलाई अरु मान्छेको कमजोरीप्रति खिसिटियुरी गर्नेबेला प्रयोग गर्दछौँ । यस्ता सम्बोधनप्रति हामीलाई हेक्का नहोला तर अपाङ्गता भएको व्यक्तिका लागि यो शब्द कति पीडादायी होला, सोचौँ त । बोलीचाली कै भाषा बनाइएको यस्ता सम्बोधनहरुको प्रयोग अब हटाउँदै जानु पर्दछ ।
यस्ता मान्छेहरुलाई सम्मानपूर्वक हेर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने काम राज्यको हो । सम्भव भए कुनै ठाउँमा आवास गृह बनाएर राख्ने र उनीहरुको क्षमता र सक्षमता अनुसार रोजगार दिने व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्दछ । उनीहरुको सीप, रुचि र संभावना हेरेर आवासीय ब्यबस्थापनबाट उत्पादनमा उपयोग गर्ने ब्यबस्था सजिलै हुन सक्दथ्यो तर अरबौ खर्चेर मन्त्री क्वाटर बनाउने सरकारले यता ध्यान दिएको पाइदैन । यो बिल्कुलै सम्भव छ तर सरकार न आफनो योजना बनाउछ न अरुका कुरा सुन्छ ।
हाम्रा शासकहरु सुरक्षा घेराभित्र चिल्लो गाडीमा गुड्दैमा आफूलाई उच्च व्यक्तित्व ठान्ने प्रवृत्तिका कारण राज्यको साहरा चाहिनेहरुले कहिल्यै पनि नागरिकको अुनभूति गर्न सकेका छैनन् । सडकमा उनीहरु पनि हिड्नु पर्दछ भनेर समेत सोचेको छैन बरु ठुलाबडाको सवारीमा उनीहरुलाई घिसारेका कैयौ दुश्यले मन पोलेको छ । बिरामी हुँदा उनीहरु पनि अस्पतालसम्म पुग्नु पर्दछ भनेर भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गरेको छैन ।
हुनत अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुका सन्दर्भमा कानुनहरु नबनेका होइनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने सुविधा तथा सहुलियतमा विशेष सुविधान भएको पनि होइन, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएपछि ‘लंकामा सुन छ, मेरो कान बुच्चै’ भने जस्तै कागजमा उल्लेख हुनु र नहुनु उस्तै हो ।
बाँच्नका लागि अरुको आडभरोसा चाहिने भएपछि स्वभाविक हो, त्यस्तो ब्यक्ति परिवारमा ठूलो समस्या बन्छ । अरबौ सम्पतिका मालिक पनि उपयोग सकिएपछि सडकमा सुतेको र घिस्रीएको दृश्यहरु भेटिएका छन् भने अरु गरिवको त के कुरा । त्यसैले यस्ता व्यक्तिहरुको साहरा राज्यबन्न सक्नु पर्दछ । कुनै कमजोरीले जन्मँदै अपाङ्गता बन्नु र भवितव्यले अपाङ्गता बन्नु पर्ने अवस्थाका त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गरेर आफै बाँच्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिदिनु पर्दछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा क्षमता हुँदैन भन्ने हुँदैन । वैज्ञानिक स्टेफन हकिन्स एक उदाहरण हुन् । मौका पाउन नसके बलिया हातपाखुरा र मोटाघाटा तिघ्रा भएका व्यक्तिले पनि केही गर्न सक्दैनन् । को स्वस्थ जन्मियो, को कमजोर जन्मियो भन्ने कुरा होइन, कोसँग के क्षमता छ भन्ने कुराको पहिचान गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना राज्यले गर्न सके शारीरिक कमजोरीलाई असक्षमता भनेर बुझ्ने र हेर्ने अवस्थामा केही भने पनि कमि पक्का आउने छ । ७ औँ संविधान दिवस मनाइरहेको सन्दर्भमा सबै राज्यले मानवको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सकोस् हामी सबै नागरिकमा यहि शुभकामना ।